စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ် Wifi Smart Wall Touch Light Switch ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးရောင်းချနေသည့် Wifi Smart Wall Touch Light Switch Quotation
1. Wifi Smart Wall Touch Light Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
အရည်အသွေးမြင့် Crystal Tempered Glass Panel ဒီဇိုင်း၊ ဘယ်တော့မှ မှေးမှိန်မသွားပါဘူး။
အပြာရောင် LED အချက်ပြမှုနှင့်အတူ, အလွန်ထူးခြားသည်။
အသစ်စက်စက် တင်သွင်းလာသော အမေရိကန် IC နှင့် capacitive touch အာရုံခံစားမှု၊ ပိုသာလွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိလွယ်ရှလွယ် ထိတွေ့မှု။
ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းများကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် သင့်အိမ်ကို ပိုမိုလုံခြုံစေပါသည်။
ပိုမိုလူသားဆန်သောဒီဇိုင်း- လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြန်ဝင်လာသောအခါတွင် မီးလုံးပိတ်သွားသည်၊ လျှပ်စစ်ကို သက်သာစေသည်။
အသံတိတ်ထိပါ၊ သင့်အိမ် သို့မဟုတ် ရုံးကို တိတ်တိတ်နေပါ။
တစ်ခုတည်းသော တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးထိန်းချုပ်မှု၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ ခလုတ်အဟောင်းကို တိုက်ရိုက်အစားထိုးပါ။
မီးချောင်းများ၊ ချောင်းမီးချောင်းများ၊ led မီးချောင်းများ အစရှိသည့် ဘုံမီးလုံးများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
အိမ်၊ ရုံး၊ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ စသည်ဖြင့် သင့်တော်ပါသည်။
2. Wifi Smart Wall Touch Light Switch ၏အင်္ဂါရပ်များ
Shinelite သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသည့် Wifi Smart Wall Touch Light Switch ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertekwith CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။MOQ သည် 1 pc ဖြစ်ပြီး WIFI စမတ်ခလုတ်ကို မည်သည့်ပမာဏမဆို ယူနိုင်ပါသည်။
3. Wifi Smart Wall Touch Light Switch ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ
လည်ပတ်ဗို့အား AC 110-240V/50Hz~60Hz
Load အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ 5-300W/Gang
အသက်ရှည် အကြိမ်ရေ 100,000 ကျော်
hot Tags:: Wifi Smart Wall Touch Light Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်